Waa Kuma Ra’iisul Wasaaraha La Magacaabay Ee Soomaaliya? – Great Banaadir
Maxamed oo 57 sano jir ah, ayuu Farmaajo sheegay inuu ku soo xushay “Aqoonta, waayo aragnimada iyo kartida uu u leeyahay inuu sii ambaqaado dadaallada dowlad-dhiska iyo horumarinta qorsheyaasha Qaranka”.
Maxamed Xuseen Rooble ayaa haddii uu helo kalsoonida baarlamaanka waxa uu la wareegi doonaa xafiiskii uu banneeyay ra’iisul wasaarihii isaga ka horreeyay, ee Xasan Cali Khayre, kaas oo 25-kii bishii Luuliyo uu guddoonka baarlamaanka sheegay in kalsoonidii lagala laabtay.
Bayaanka lagu magacaabay Rooble ee ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya ayuu Madaxweyne Farmaajo ku faray: “In uu deg-deg ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseedda in ay ka dhaqan geliso doorasho, dadaal muuqdana gelisa sidii loo xoojin lahaa guulaha laga gaaray amniga, dib u dhiska Ciidamada Qalabka Sida, horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha, baahinta adeegyada aas-aasiga ah, kamiro dhalinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo musuqmaasuqa.”
Hadaba Waa Kuma Maxamed Xuseen Rooble?
Waxa uu waxbarashadiisii asaasiga aheyd ku soo qaatay Magaalada Muqdisho, halkaas oo markii dambe uu Jaacamaddii Ummadda kaga biiray kuliyaddii Injineerinka oo uu ka qalinjabiyay sanadku markuu ahaa 1990.
Sanaddii 2000 ayuu jaamacad ku taal Magaalada Stockholm ka qaatay shahaadada heerka labaad ee Masters Degree-ga.
Sida ku cad nuqul ka mid ah CV-giisa, waxa uu ku hadlaa shan luuqadood oo kala ah Soomaali – lugaddiisa hooyo, Ingiriis, Iswedish, Carabi iyo Talyaani.
Shil Khasaaro Gaystay Oo Ka Dhacay DDS
C/raxmaan C/Shakuur Oo Madaxweyne Farmaajo Ku Eedeeyay Dastuur Jebin